नवलपुरलाई आर्थिक समृद्धि बनाउन जोड दिनेछु | चितवन पोष्ट
गृह » नवलपुरलाई आर्थिक समृद्धि बनाउन जोड दिनेछु
विसं २०२६ साल साउन १० गते पाल्पामा जन्मिएका पुष्प पाण्डे अहिले नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनले पाल्पाकै त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक तहसम्मका अध्ययन गरेका छन् ।
उनले अहिले कावासोतीमा दुर्गा फर्निचर एण्ड ग्लास हाउस सञ्चालन गरेका छन् भने अर्का अध्यक्षका उम्मेदवार डासुराम पोख्रेलसँगै मिलेर त्रिवेणी रियल स्टेट प्रालि सञ्चालन गरेका छन् ।
कपिलवस्तुमा महाशक्ति सिमेन्ट उद्योगसमेत सञ्चालन गरेका पाण्डे नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक सदस्य हुन् भने अहिले कोषाध्यक्षको रुपमा रहेका छन् ।
खास गरी तपाइँको उम्मेदवारी लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेदवारी भएको चर्चा छ । यो उद्योगी, व्यापारी, उद्योग वाणिज्य संघमा पनि कस्तो खाले राजनीति हो ?
यसलाई एउटा प्यानल भन्दा पनि समूहको रुपमा लिएका छौं । नवलपुर जिल्ला नयाँ जिल्ला भइरहँदा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्ष बन्न इच्छा, आकांक्षा हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले केही साथीहरुले समूह बनाएर उम्मेदवारी दिएका हुन्, यसलाई राजनीतिक समूह भन्दा पनि साथीसाथीहरुको समूह भनेर बुझ्नुपर्छ ।
तपाइँहरु उद्योग वाणिज्य संघमा रहने व्यापारीहरु नै राजनीतिक रुपमा विभक्त हुँदा व्यापारीको हकहित कसरी हुन्छ ?
हामीहरु राजनीतिकरुपमा बाँडिएको होइन । विभिन्न पदमा विभिन्न व्यक्तिको आकांक्षा देखिएकोले एउटा समूहमा आफूले चाएको पद नपाएका साथीहरु अर्को समूहबाट उम्मेदवारी दिएका हुन् । निर्वाचनपछि हामी एउटै समूह भएर काम गर्ने छौं ।
तर, तपाइँहरुकै व्यापारी साथीहरुले उद्योग वाणिज्य संघ राजनीतिक चलखेल गर्ने थलो भयो भनेर भन्नु हुन्छ त ?
खै कसरी हेर्नुभयो थाहा भएन, हामी त्यो सोचेर लागेका छैंनौं । उद्योग वाणिज्य संघ भनेको सबै व्यवसायीहरुको साझा संस्था हो, हामी त्यही नै सोचेर लागेका छौं । यसले व्यापारीका वस्तु उत्पादन गर्दादेखि बजारमा पुग्दासम्मका समस्या, पसल उद्योग दर्तादेखि अन्तिम अवस्थामा नपुग्दासम्म आइपर्ने समस्या हल गर्ने संस्था उद्योग वाणिज्य संघ हो न कि यो राजनीतिक गर्नका लागि खोलिएको संस्था हो, सबैलाई त्यसरी बुझ्न म आग्रह गर्दछु ।
तपाइँले नै भन्नु हुन्छ होला हामी राजनीतिक दलहरुबाट पीडित छौं भनेर अनि तपाइँहरुले नै राजनीति गर्दा व्यापार व्यवसायमा असर गर्दैन ?
अवस्य नै गर्छ, यो निर्वाचनको बेला राजनीतिक प्यानल जस्तो देखिएको छ, त्यस्तो होइन, निर्वाचन सकिएपछि हामी राजनीतिक प्यानलको रुपमा रहदैनौं । जसले जिते पनि एउटै भएर एकले अर्कालाई समेटेर काम गर्ने र्छौ ।
तपाइँहरुनै लोकतान्त्रिक प्यानल र वामगठबन्धन प्यानल भनेर चुनावमा जानु भएको छ, यसरी आउने नेतृत्वले कसरी व्यापारीहरुको हकहितको पक्षमा काम गर्छ त ?
मैले बारम्बार भनेको छु यो राजनीतिक प्यानल होइन, यो समूह हो, हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी राजनीतिक रुपमा देखिदैनैं । अहिले राजनीतिक प्यानल जस्तो देखिए पनि हामी राजनीतिक प्यानल होइनौं ।
नवलपरासी जिल्लाको खण्ड रहेको नवलपुर अहिले नवलपुर जिल्ला भएको छ । अब तपाइँको नेतृत्वले यस क्षेत्र नवलपुरको विकास कसरी गर्नु हुन्छ अनि यहाँका व्यवसायीहरुको समस्या के देख्नु भएको छ ?
राम्रो कुरा उठाउनुभयो, यो एउटा मौका पनि हो कावासोती सदरमुकाम भएको छ । त्यस कारणले पनि यो उद्योग वाणिज्य संघलाई महासंघबाट मान्यता दिलाउने मेरो योजना छ । हामीले नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई जिल्ला संघको रुपमा लैजाने सोच बनाएका छौं । यहाँ एउटा समस्या देखिएको छ भने सदरमुकाम भइरहेको कावासोतीमा यहाँ एउटा सेमिनार गोष्ठी गर्ने ठाउँ छैन, जग्गा व्यवस्थापन गरेर सेमिनार गर्न सक्ने भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम गर्ने राम्रो हल छैन । यहाँ घरबेटी र व्यापारीबीच घरबहाल सम्बन्धी विवाद छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर लैजाने छु । यहाँ रहेका अव्यवस्थित बजारहरुलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ लागेका छौं । नारायणी नदी पुलदेखि त्रिवेणीसम्म तटीय क्षेत्रको विकास गरी यसलाई होमस्टे सहित पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने, नवलपुर जिल्लाको विकासमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने, बालुवा डाँडामा होमस्टे निर्माण गरेर यस क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिकस्तर उकास्न लाग्ने विश्वासका साथ लाग्ने छु ।
तपाइँले जित्नु भयो भने यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुले तपाइँसँग के अपेक्षा गर्ने ?
म यस क्षेत्रका व्यापारीहरुको हकहितको पक्षमा लड्ने छु, नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई जिल्ला संघको मान्यता दिलाउने छु, महासंघमा आवद्धता गराउने छु, नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको सेमिनार, गोष्ठी गर्न मिल्ने हलसहितको आफ्नै जग्गामा भवन निर्माण गर्ने छु । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा लाग्नेछु । म नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको तदर्थ समितिको सदस्य हो । म यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग भिजेको छु । यहाँको समस्या पहिचान गरेको छु । यहाँका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुले मलाई नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न सक्छ भनेर अध्यक्षमा उम्मेदवारी बनाउनु भएको छ । त्यसैले मैले उहाँहरुको चाहना अनुसार काम गर्नेछु ।